The Feestooyinka Winter Best In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Feestooyinka Winter Best In Europe
Samee ugu xilli qabow adigoo booqanaya ku Feestooyinka Best Winter in Europe. ciidaha ayaa ku lug wax walba oo ka barafka iyo snowboarding muusig, Majaajilo, farshaxan baraf, iyo maraan damaashaad sitaa. Hoos waxaa ku qoran waa top 5 Gogoldhiga waxa aad doonaa helayo dhacaya guud ahaan Yurub ee January iyo February.
Aynu bilowno Ciidaha Jiilaalka ee Yurub, iyo off tagno Scotland
Edinburgh Hogmanay waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Dabaaldegyada New sano dunida ee, mar nigis dhab ah duurjoogta ah iyo wooly. Hogmanay waa eraygii Scottish waayo, Sanadka Cusub ee Eve oo iid Hogmanay Edinburgh ee waxa uu noqday mid ka mid ah ugu weyn dabaal sanadka cusub ee dunida. Edinburgh ee Hogmanay waa damaashaad 3-maalin full of dhacdooyinkii in ka mid ah israac ah torchlight, noolow riwaayadaha muusikada, dhacdooyinka qoyska, Koox wadada weyn, cayaar dhaqameed, rashka, iyo xataa dhoolatus costumed in dhammaanaysaa a maquufin qabow webiga!
London Hyde Park Winter Ihmemaa laabtay Hyde Park ee 2018 iyadoo ay dhib barafka la dhalaalayay, suuqa weyn ee kirismaska, iyo raacid xiiso leh. Hubi in aad qaadato lacag caddaan ah iyo imaan hore si looga fogaado in ay seegeen raacid la yaab leh in iibin karaa si degdeg ah! Winter Ihmemaa waa aadka loo jecel yahay, oo aan ku qorin yaabaa Feestooyinka our Best Winter ee Europe oo aan xusay!
Shidida ilaa maalmihii madoobaa iyo habeen ah Luxembourg City waa Winterlights Luxembourg. Oo ka mid ah hawlaha badan iyo dhacdooyin on dalab qoyska oo dhan, ah suuqyada Christmas sii jecel adag! Waxaad filan kartaa alaabta handmade, dharka, alaabta lagu ciyaaro, kaabayaal, iyo dabcan (aannu u jecel) waxbadan cuntada delicious kaliya sugayaan in la dhadhamiyey! From dhaqanka ah “Kichelchen baradho” si ay dhadhan dheeraad ah qalaad ka dalal fog-Turray, waxaa ku xidhan tahay in ay qof walba wax u.
Trier in Tareenadu Luxembourg
Venice inta lagu guda jiro Damaashaadka waa qarax midabka iyo fashion-abuurka. Taas ayaa ka dhigaysa for duwan ah oo qurux badan si ay barafka qabow cad. Damaashaadka (ama "Carnival") waa mid ka mid ah dabaal ugu weyn ee Italy iyo ka waji uguurtay inay isu ekaysiiyaan kubadaha, meel sameeyaa sida Venice! Like fikradda ah markuu arkay magaalada oo ay ugu dabaaldegga iyo midabo? Markaas gelin this on liiska Feestooyinka Best Winter in Europe.
Our doorashada ugu danbeysay ee Feestooyinka Winter in Europe waa: Amsterdam
Raadinta wax ka badan cultured? Markaas ballansan aad tigidh si ay bandhig u furan-hawada ee loo yaqaan Amsterdam Light Festival. Munaasabadan ayaa waxaa soo jiidata fanaaniinta iftiin qaran iyo mid caalamiba ugu wanaagsan ee lagu soo bandhigo shaqada ay dhex xarunta Amsterdam oo ay la socdaan oo ay caanka ah kanaalada. dhacdo sanadkan waxa ay maamushaa ka 29 November 2018 ilaa 20 January 2019. sannad kasta, boqolaal gudbiyeen waxaa soo gudbiyeen samaynta, injineero, iyo fannaaniinta adduunka oo dhan.
iftiinka rakiban tahay of Light Festival Amsterdam bandhig biyaha iftiimin maalin kasta ka 5 pm ilaa 11 pm. Light Festival Amsterdam waa in hawada u furan oo lacag la'aan ah qof walba. fursad weyn oo ay ku qaado sawiro cajiib ah!
Habka ugu wanaagsan ee lagula kulmo xulkan Xilliyada Jiilaalka ee Yurub waa booqashada bandhiga biyaha doon. Shirkadaha dalxiiska kanaal waxay bixiyaan safarro hagitaan oo gaar ah oo ay la socdaan farshaxanka. The Amsterdam Light Festival Cruise qaadataa 75 daqiiqo.
Ma rabtaa in aad soo booqato mid ka mid ah Feestooyinka Jiilaalka, kuwaas oo in Europe? hal hab oo hal meel loo sameeyo kaliya ka dibna waxaa jira. SaveATrain, No ajuurada jaale, dhibaatana ma leh! Book hadda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-festivals-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#ciidaha #ciidda qaboobaha #Ciidaha jiilaalka europetravel longtrainjourneys talooyin tareenka tareen safarka travelamsterdam Winter Winterholiday